Martech Zone | Fikarohana, fahitana, ianaro ny teknolojia momba ny varotra sy ny marketing
Talata, Septambra 14, 2021 Talata, Septambra 14, 2021 Douglas Karr
Search Engine Optimization (SEO) dia sehatra sarotra sy mivoatra hatrany. Ireo zava-misy toy ny algorithman'i Google miova, ny fironana vaovao, ary, tato ho ato, ny fiatraikan'ny areti-mandringana amin'ny fomba fitadiavan'ny olona vokatra sy serivisy dia manasarotra ny fametahana paikady SEO iray. Ny orinasa dia tsy maintsy nampitombo ny fisian'ny tranokalan'izy ireo mba hiavaka amin'ny fifaninanana ary olana ny mpivarotra ny sehatra tondra-drano. Noho ny vahaolana SaaS maro be any, dia sarotra ny misafidy ary
Alakamisy, Septambra 9, 2021 Alakamisy, Septambra 9, 2021 Rebecca Clyde
AI chatbots dia afaka manokatra varavarana hanana traikefa nomerika tsara kokoa sy hampitombo ny fiovam-pon'ny mpanjifa. Fa izy ireo koa dia afaka mampiakatra ny traikefan'ny mpanjifanao. Ity ny fomba fanitsiana izany. Manantena ny mpanjifa anio fa ny orinasan-dry zareo dia hanolotra traikefa manokana sy takiana 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro, 365 andro amin'ny taona. Ny orinasa amin'ny indostria rehetra dia mila manitatra ny fomba fiasa mba hanomezana ny mpanjifa ny fifehezana tadiavin'izy ireo ary hanova ny fidiran'izy ireo
Inona avy ireo Vitam-pejy Core an'ny Google sy ireo tranga iainan'ny pejy?
Alakamisy, Septambra 9, 2021 Alakamisy, Septambra 9, 2021 Douglas Karr
Google dia nanambara fa ny Core Web Vitals dia ho lasa laharana voalohany amin'ny Jona 2021 ary ny famoahana dia kasaina hatao amin'ny volana Aogositra. Ireo olona ao amin'ny WebsiteBuilderExpert dia nametraka ity sary feno ity izay miresaka amin'ny tsirairay amin'ny Core Web Vitals (CWV) an'ny Google sy ny Factors Factors momba ny pejy, ny fandrefesana azy ireo, ary ny fomba hanatsarana ireo fanavaozana ireo. Inona avy ireo Vitals Google Web Core? Ny mpitsidika ny tranonkalanao dia maniry tranonkala manana traikefa pejy mahafinaritra. Ao amin'ny
Onollo: fitantanana haino aman-jery sosialy ho an'ny ecommerce
Talata, Septambra 7, 2021 Talata, Septambra 7, 2021 Douglas Karr
Ny orinasako dia nanampy mpanjifa vitsivitsy tamin'ny fampiharana sy fanitarana ny ezaka fivarotana Shopify nandritra izay taona vitsy lasa izay. Satria i Shopify dia manana fizarana lehibe eo amin'ny sehatry ny e-varotra, ho hitanao fa misy taonina fampifangaroana novokarina izay manamora ny fiainana ny mpivarotra. Ny varotra varotra sosialy amerikana dia hitombo mihoatra ny 35% mihoatra ny $ 36 miliara amin'ny 2021. Insider Intelligence Ny fitomboan'ny varotra sosialy dia fitambaran'ny fampidirana